09/05/2022 - Celebrity Corner
Celebrity Corner | 09/05/2022
ပရိသတ်တွေ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ မင်းသား မင်းမော်ကွန်း ရဲ့ ငယ်ဘဝ ဓာတ်ပုံလေးများ… မင်းသား မင်းမော်ကွန်း ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲဖခင်ကတော့ အားလုံးကချစ်ခင်ရတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးဇင်ဝိုင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာမျိုးရိုးရှိသူပီပီ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်လက်ခံ အားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုမှီခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးထားနိုင်တဲ့
မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သမီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကြွေဆင်းသွားစေတဲ့ ထက်ယံရဲ့ ကတိစကား….
မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သမီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကြွေဆင်းသွားစေတဲ့ ထက်ယံရဲ့ ကတိစကား…. ထက်ယံနဲ့ သူ့ပပထက်ဦးတို့ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးခဲ့ပြီး မနေ့က ၈.၅.၂၀၂၂ ညမှာတော့ Inya Lake ဟော်တည်မှာ ညစာကျွေးပြီး Dinner ပွဲလေးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထက်ယံဆိုတဲ့ အဆိုတော်ကောင်လေးဟာ သူ့ဘဝမှာ သီချင်းကိုသာအားထားခဲ့ပြီး ခပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကောင်လေးပါ။ သူ့စိတ်သူ့သဘောနဲ့နေချင်သလိုနေခဲ့တဲ့ ကောင်လေးကို
စင်ပေါ်မှာ သီချင်းတက်ဆိုနေတဲ့ မေမေ့ကို အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် အရာတစ်ခုလုပ်ပြလိုက်တဲ့ Treasure လေး… ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမီး​လေးကြောင့်လည်းပိုပြီးချစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေမေမေတို့နဲ့တူအောင်ချစ်စရာကောင်းနေတာပါ။ မေမေဖြစ်သူဟာ သမီးလေးရဲ့video လေးတွေပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ပရိသတ်တွေကလည်း သမီးလေးရဲ့video လေးတွေကို အမြဲ ကြည့်ပြီး ချစ်နေရတာပါ။ ကင်မရာလေးကိုင်တာနဲ့တင်Postလေးတွေပေးတက်ပြီးချစ်စရာကောင်းနေတာပါ။ ခုမှာလည်း သမီးလေးဟာ မေမေစန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့တူတူ စင်ပေါ်တက်ပြီးသီချင်းလေး တူတူဆိုနေတာပါ။ သမီးလေးကို လက်ဆွဲပီးစင်ပေါ်မှာ သီချင်းဆိုရ
ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ သီချင်းလည်းဖြစ် ချစ်ငယ်ရဲ့ မွေးနေအမှတ်တရအနေနဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ အတူသီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး
ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ သီချင်းလည်းဖြစ် ချစ်ငယ်ရဲ့ မွေးနေအမှတ်တရအနေနဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ အတူသီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး သရုပ်ဆောင်ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လှူဒါန်းမှုတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီး ပြည်သူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ အလှူအတန်းတွေရက်ရောစွာပြုလုပ်တတ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ လက်ရှိကာလတွေမှာလည်း အများအကျိုးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပါဝင်အားဖြည့်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ သီချင်းတွေကို အသံပါဝါအား ကောင်းကောင်းနဲ့
မိခင်ကြီးအတွက် အနုပညာချွေးနဲစာလေးနဲ့ တိုက်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို အမေများနေ့မှာ ပုံလေးတွေတင်ပေးလာတဲ့ သင်းသင်း… ပရိသတ်ကြီးရေအလှမယ်သင်းသင်းကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ နာမည်တခုရအောင် ကြိုးစားနေပြီး ဇာတ်လမ်းတိုတွေနဲ့ ကြောငြာတွေရိုတ်ကူးနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ အမေများနေ့လေးဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေကိုတိုက်ဆောက်ပေးခဲ့ကြောင်းဝမ်းသာစွာပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အလှမယ်သင်းသင်းကအခုဒီပုံလေးတွေ အခုမှတင်ဖြစ်လို့ပါ။ကျမဘဝမှာ ရည်မှန်ချက်ကအမေကို ဒီထက်မက ပြည့်စုံအောင်ထားပေးချင်တယ်အမေနဲ့ အဖေနာမည်နဲ့ ဒီထက်မကအလှူဒါန်းတွေ ပြုလုပ်ပေးချင်သေးတယ်ရွာဘတ်တွေမှာအမေနဲ့အဖေအတွက်အလှူပုံတစ်ချို့ရယ်လှူပေးတာလေးတွေကိုFacebook ပေါ်မတင်ဖြစ်တာပါ။ တစ်ချို့ကကျမကိုမေးကြပါတယ်နင့်ပိုက်ဆံရှာတယ် ဘယ်ရောက်ကုန်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကျမမိဘဝအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်တယ်။ မနေဘူးတဲ့အိမ်နဲ့ထားပေးချင်တယ်။မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာလေးတွေပို့ပေးချင်တယ်။ မရောက်ဖူးသေးတဲ့
တောင်းပန်တာတောင် ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ မင်းသမီး မြနှင်းရည်လွင်
တောင်းပန်တာတောင် ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ မင်းသမီး မြနှင်းရည်လွင် MRTV-4 မှထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဆိပ်သွေးဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု့ကို ပိုမိုရရှိလာခဲ့တဲ့ မြနှင်းရည်လွင် ဟာ လက်ရှိမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ သူမဟာ အာဏာစသိမ်းတဲ့နေ့မှစပြီး အခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင် အာဏာရှင်ကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအားလုံး အမှန်တရားအတွက် လမ်းမပေါ်ထွက် ဟစ်ကြွေးကြတဲ့အချိန်ကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။